ပင်မစာမျက်နှာ အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2019 အတွက် TRF
စာနယ်ဇင်းသမားများသည်ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးများကိုဖြန့်ဝေနေကြသည်။ ကျောင်းအားလုံးတွင်ထိရောက်သော၊ ဦး နှောက်ကိုအာရုံစိုက်သောလိင်ပညာရေးကိုတောင်းဆိုရန်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထည့်ဝင်ခြင်းများကို NHS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအားလေ့ကျင့်ပေးရန်လိုအပ်သည် သုတေသနလုပ်ငန်း ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများအကြောင်း။ ဒီစာမျက်နှာကသတင်းစာတွေနဲ့အွန်လိုင်းမှာငါတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ 2019 ပြည့်စုံလာသည်နှင့်အမျှနောက်ထပ်ပုံပြင်များစွာတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်၊ Roisin Agnew မှစာသား။ အွန်လိုင်း9ဒီဇင်ဘာလ 2019 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်
Grace Millane, India Chipchase, Natalie Connolly: အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ကြောင်းများကို၎င်းတို့နှင့်ဆန့်ကျင်။ အသုံးပြုနေခြင်း၊ သေခြင်း၌
အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသည်ယူကေတွင်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာနှင့်နားမလည်သည့်နည်းများဖြင့်တိုးပွားလာနေသည်။ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းခံရသည့်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းမှသည် BDSM အလေ့အထများကိုလူသိများလာခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းများအထိဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘဲလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလှိုင်းသစ်၏အကြောင်းရင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အစွန်းရောက်လိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံများတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်တိုးပွားလာသောဆက်ဆံမှုသည်ယနေ့လိင်၌ကျယ်ပြန့်သောပြproblemနာကိုဖော်ပြနေသည်။
အဆိုပါ ၂၁ နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်ကျောပိုးအိတ် Grace Millane ကိုသတ်မှု နှင့်နောက်ပိုင်းအဆင့်မြင့်စစ်ဆေးမှုသည်နက်ရှိုင်းစွာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ကြောင်းများကို၎င်းတို့အားအကြမ်းအားဖြင့်ကာကွယ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
သူမ၏ ၂၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်မီတွင်နယူးဇီလန်၌အပန်းဖြေခရီးထွက်နေသည့် Millane သည် Tinder ၌သူမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တစ်ညအိပ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးသူမလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်သူမကိုသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်လကဂျူရီသည်အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချသော်လည်းဂရေ့စ်၏လိင်မှုဘ ၀ ကိုသူမအားဆန့်ကျင်ကြောင်းသက်သေပြသည့်အနေဖြင့်တရားရုံးမှဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ သူမယခင် BDSM နှင့် Whiplr ကဲ့သို့သော fetish ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်သူမပါဝင်ခဲ့ခြင်းမှာသူမအနေဖြင့်အချို့သောအလေ့အကျင့်အမျိုးအစားများကိုနှစ်သက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သူမ၏ရည်းစားဟောင်းဟောင်းတစ် ဦး အားဂရေ့စ်သည်လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝရန်အတွက်မွန်းကျပ်နေခြင်းကိုသက်သေပြရန်အတွက်ကာကွယ်ရေးမှပင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်၊ 'အကြမ်းအားဖြင့်လိင်' ကာကွယ်ရေး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းတစ်ဝက်နီးပါးတွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဒီပေါ်ထွက်လာနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအံ့အားသင့်သွားပြီး actuary Fiona McKenzie ကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ် ဒီဟာကိုသဘောမတူနိုင်ပါ, 'ကြမ်းတမ်းသောလိင်' - သို့မဟုတ်ဟုခေါ်တွင် '' ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့။အရိပ် ၅၀'- ဗြိတိသျှတရားရုံးတွေကနေကာကွယ်ရေးကိုရခဲ့တယ်။ အလုပ်သမားပါလီမန်အမတ် Harriet Harman နှင့်အတူ, အုပ်စုသည်ပုဒ်မထည့်ရန်ကြိုးစားနေသည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေကြမ်း အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သောအမျိုးသားတစ် ဦး သည်သူမသေဆုံးစေခဲ့သောအကြမ်းဖက်မှုကိုသဘောတူကြောင်းပြောဆိုရန်တရားမဝင်မှုကိုဖြစ်စေသည် Millane ကိစ္စတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းအချို့သောလိင်ဂိမ်းများကိုသဘောတူခြင်းသည်အသတ်ခံရရန်သဘောတူခြင်းနှင့်မတူကြောင်းကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများကငြင်းဆို တရားမ ၀ င်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကာကွယ်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုခံရသူများကိုရှေ့ဆက်လာရန်ထပ်မံတားဆီးထားပြီး၊ သူတို့၏လိင်ဘ ၀ များကိုအရှက်ရစေခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် - တရားရုံးစနစ်အတွင်းအလွန်အမင်းပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။
“ မကြာခဏဆိုသလိုသူတို့နာမည်နဲ့ကျော်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သူနဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကိုမင်းရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ” Fiona McKenzie, ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကျနော်တို့သဘောမတူနိုင်
McDenzie က“ ဒါကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လုံးဝထုံးတမ်းစဉ်လာအရအထီးကျန်အမျိုးသားအကြမ်းဖက်မှုပဲ။ “ ဒါပေမယ့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာသတင်းအချက်အလက်တွေအရအကြောင်းတခုခုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေ '' ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရချင်တယ် '' လို့ပြောကြတယ် ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကဆေးရုံတက်ချင်နေတယ် ''
“ မကြာခဏဆိုသလို၊ သင့်နာမည်ကျော်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သူနဲ့သူမမတိုင်ခင်လိင်မှုကိစ္စအမျိုးမျိုးကိုသူဝန်ခံခဲ့တဲ့ဒီစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတွေ့ရဘူး” ဟုမက်ကင်ဇီဆက်ပြောသည် "ကျနော်တို့က ၉၀ နဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအကွာအဝေးကိုပြန်ရောက်သွားပြီဆိုရင် BDSM ကောလိပ်ကျောင်းသား 'ခေါင်းမာတဲ့' kinky sex mum 'ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသတင်းစာတွေမှာအမျိုးသမီးနာမည်တွေပါနေတယ်"
ရှုပ်ထွေးသောလိင်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုလမ်းဆုံများနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည်အရေးပေါ်ပြissueနာဖြစ်လာသည်။ သက်သေအထောက်အထားများကအမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ဟုဆိုသောကြောင့်သာမက၎င်းသည် ၄၀ နှစ်အောက်ရှိလူများလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖော်ပြနေသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကကြမ်းတမ်းသောလိင်မှုသည်လူကြိုက်များလာသည်မှာဘယ်သူမှသတင်းမထွက်သော်လည်းလူငယ်များအကြားပျံ့နှံ့နေသောနောက်ကွယ်ကလိင်နိုင်ငံရေးဟာမသိသေးပါဘူး။ ကထုတ်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု များအတွက် Savanta ComRes ဘီဘီစီရေဒီယို5ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသမီး ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်သဘောမတူသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်“ မလိုလားအပ်သော” ရိုက်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်း၊ ထိုအမျိုးသမီး ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သည်ဖိအားပေးခံရခြင်း၊ အကြမ်းဖက်လိင်အလေ့အကျင့်များကိုပုံမှန်ပြုခြင်းသည်လူငယ်များအကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုများပြန့်ပွားခြင်းအပေါ်မကြာခဏအပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်, ၏မာရိသညျရှပ်သည်နှင့်အညီ ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပညာရေးကိုအထူးပြုသည့်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ - porn သည်အမျိုးသမီးများအား“ တစ်စုံတစ်ရာကိုခံစားရရန်ကြမ်းတမ်းသောအရာများကိုရှာဖွေရန်” အလားတူစီစဉ်ထားသည်။
“ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာမိန်းမပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းဟာ ၁၀ နှစ်ကြာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်၊ လက်ရှိယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခိုက်အတန့်၌အမျိုးသမီးများအားလိင်မှုကိစ္စလွတ်မြောက်မှုအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွန်းများနှင့်တလွဲတလွဲယူမှတ်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအချက်မှာအမျိုးသမီးများသည်ယဉ်ကျေးမှု၏သားကောင်များမဟုတ်ကြသော်လည်းသူတို့၏ဆန္ဒများကိုမသိမသာပုံသွင်း။ သူတို့၏လိင်စိတ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားမဟုတ်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများအားပြန်လည်ပြဌာန်းခြင်းနှင့်မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှာဖွေရန်သူတို့ကိုစည်းကမ်းလိုက်နာစေခြင်းဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်မှာ။
ကြမ်းတမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည် BDSM အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ယင်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ လူများသည်ရပ်ရွာမှကန့်သတ်ထားသည့်သဘောတူညီချက်နှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအားမချမှတ်ဘဲ၎င်း၏ဗေဒကိုချေးငှားပြီး deviant-status ဟုယူဆသည်။ (မလွှဲမရှောင်ရွားလှ) ကနေခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ဆောင်ခဲ့ခံရ အရိပ် ၅၀ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာသောအလွန် BDSM ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းအားအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းကိုသာအကျိုးသက်ရောက်မှုကသာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ သဘောတူခွင့်ပြုချက်သည် Kink ယဉ်ကျေးမှု၏အခြေခံတွင်ဖြစ်သည်။ ။
အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဤကာကွယ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအချိန်ထိပြောရန်ခက်ခဲနေသေးသည်။ သို့သော်၎င်းအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်ကြည့်လျှင်ဥပဒေရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်ဆင့်တွင်အကာအကွယ်များထားရှိရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာလိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုသည်ပုဂိ်္ဂုလ်ရှိ 'အကျပ်အတည်း' နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်။ စုပေါင်းအကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရသောအချိန်တွင်အမျိုးသားများသည်ကြီးစိုးမှုနှင့်အာဏာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုင်တွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်မှာနိဂုံးချုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအမှန်တကယ်သက်သေအထောက်အထားမရှိသေးပါ။ သို့သော်အမျိုးသားများသည်အိပ်ခန်း၏ privacy နှင့်အများပြည်သူမျက်စိနှင့်အဝေးတွင် 'ပြန်တွန်း' နေခြင်းရှိမရှိကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ post-metoo ယခုအချိန်တွင်အမျိုးသားများအားလိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ အချို့သောအမျိုးသားများသည်ယခင်သူတို့၏ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကိုယခုလက်မခံနိုင်ဟုသတ်မှတ်ခံရသည်။ အခြားသူများကမူလှုပ်ရှားမှုနောက်ကွယ်အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ပိုမိုအင်အားနှင့်မြန်နှုန်းတို့ဖြင့်ရှေ့သို့ရွေ့လျားသွားသောအပြောင်းအလဲများကိုမကျေနပ်ကြပါ။
အောက်မေ့ခြင်းနှင့်ပုန်ကန်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သူစာရေးဆရာနှင့်တရားအားထုတ်ရန်ခေါင်းဆောင် Conor Creighton ကယခုအချိန်တွင်အမျိုးသားများကြား“ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိသည်” ဟုယုံကြည်သော်လည်းအမျက်ဒေါသတော့မဟုတ်ပါ။ သူက“ လူတွေကဒေါသထွက်တယ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လူတွေကိုဝေမျှဖို့ဒေါသကတစ်ခုတည်းသောစိတ်ခံစားမှုပဲ။ ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကအမျက်ဒေါသထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ၊
အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၌ဤလှိုင်းလုံးကြီးသည်မည်သို့ကာကွယ်ခံခဲ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအချိန်အထိပြောရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်တွက်စဉ်းစားသော်လည်းဥပဒေရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်ဆင့်တွင်အကာအကွယ်များထားရှိရန်အရေးကြီးသည်။ တရား ၀ င်ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောမတူနိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းအလွဲသုံးစားမှုဥပဒေကြမ်းတွင်သူမသေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ င်ကိုသူမနဲ့မထိတွေ့နိုင်အောင်အပိုဆောင်းထည့်သွင်းရန်သူတို့၏မစ်ရှင်များပါဝင်သည် သူမ၏စွပ်စွဲလူသတ်သမား။ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အရမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုသိရန်ခက်ခဲသည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုသည်ပိုမိုသိမ်မွေ့ပြီးသီးသန့်နည်းလမ်းများဖြင့်ပေါ်လွင်နေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်ပြီးချက်ချင်းပင်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်မှသာလျှင်ကြီးထွားလာသောကြီးထွားလာသော၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆိုးဝါးသောလိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနိုင်သည် သူတို့ကိုစွန့်စားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုရေတွက်။ မရ။
6th တွင်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်ဒီဇင်ဘာလ 2019
ထောက်ခံသူ Mary Sharpe သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်
ခံရပျပွောဆို မာရိကရှပ် အပေါ်နောက်ဆုံးညဥ့်ထင်ရှား။ , ဘီဘီစီ - The Nine ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးရန် မီးမောင်းထိုးပြ ၏လူသတ်မှုများအတွက်လူတစ် ဦး ခံယူချက်အောက်ပါ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Millane ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ။
21 နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်ကျောပိုးအိတ်မလေး Ms Millane သည်သူနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်နယူးဇီလန်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
အဘယ်သူ၏ပရဟိတလုပ်ငန်းမစ္စ Sharpe က အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဤဒေသရှိသုတေသနအားအများပြည်သူသိရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဖြစ်စဉ်နှင့်အသက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအားဆွေးနွေးခြင်းအားဆွေးနွေးထားသည် ဗြိတိန်အစိုးရ.
ဆောင်းပါး မာကု Howarth နှင့် စနေနေ့5အောက်တိုဘာ 2019 ရက်တွင်အင်ဒရူးဂရက်ဂိုရီ
အကူအညီတောင်းခံလူငယ်အရေအတွက်တိုးများလာသည်။ အကြံပေးသူများသည်ကလေးများအားငယ်ရွယ်သောအသက် ၇ နှစ်အရွယ်တွင်မြင်တွေ့ရသော 'ပြီးပြည့်စုံသောလိင်မှု' ဗီဒီယိုများကိုအပြစ်တင်ကြသည်
တရား ၀ င်ကိန်းဂဏန်းများအရ NHS တွင်လိင်ကုထုံးရှာသောဆယ်ကျော်သက်အရေအတွက်သည်နှစ်နှစ်အတွင်းသုံးဆကျော်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်စမတ်ဖုန်းနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကအပြစ်တင်ကြသည် လိင်ကို“ အချိန်တိုင်းပြီးပြည့်စုံစေလိမ့်မည်” ဟုမျှော်လင့်သည်.
စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းကလေးသူငယ် ၄၆၀၀ နှင့်အသက် ၁၉ နှစ်နှင့်အောက်ရှိလူငယ်များသည် 4,600-19 နှင့် 2017-18 တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းရည်ညွှန်းရည်ညွန်းချက် ၁၄၀၀ ရှိခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်မှ ၃၀ တွင် ၁ ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်အကြံပေးမှုခံယူသောလူနာ ၁၀ ဦး လျှင် ၁ ဦး ခန့်ရှိသည်ဟု NHS Digital မှဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက်များအားကုသပေးသောစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုထုံးပညာရှင် Muriel O'Driscoll က“ တစ်ခါတလေလူငယ်တွေနဲ့အတူ လိင်ပညာရေး၏ရရှိမှုရှိနေသော်လည်းသူတို့မကြာခဏမကျင့် သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိရင်ဒါမှမဟုတ်အချိန်တိုင်းလိင်ပြည့်စုံဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
“ သူတို့လုပ်နိုင်တာကိုသူတို့မသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့အခြားမီဒီယာအားလုံးမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေ၊ ဒါဟာအဖြစ်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံလိင်အလုပ်ဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတော့မမှားပါဘူး။
"သူတို့ကလူတွေကမျက်တောင်ခတ်သွားနိုင်အောင်မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ အကယ်၍ လူငယ်တစ် ဦး သည်သူတို့၏အစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်မကောင်းသောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသည်။
NHS နှင့် Brook အကြံပေးစင်တာများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးယခု Merseyside တွင်ပုဂ္ဂလိကလုပ်နေသူ O'Driscoll ကလည်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်သူတို့၏လိင်အင်္ဂါများအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့ရသူများနှင့်မတူပါဟုတခါတရံစိုးရိမ်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာတွင်ကလေးများသည်ခုနစ်နှစ်အရွယ် မှစ၍ အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုထိမိလဲနေကြသည်။ ဗြိတိန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှလေ့လာချက်အရမိဘများ၏လေးပုံသုံးပုံသည်သူတို့၏ကလေးများသည်အွန်လိုင်းပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမမြင်တွေ့ရဟုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ သို့သော်ထက်ဝက်ကျော်ကထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူငယ်များသည်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများကြောင့်“ ရှုပ်ထွေး” နေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးပရဟိတလုပ်ငန်း The Reward Foundation ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe မှပြောကြားခဲ့သည်မှာ - နည်းပညာအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်စိတ်ဓာတ်ကျနေသောစိတ်ဓာတ်ကျသူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသောဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ဘရော့ဘန်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာချိန် မှစ၍ လူငယ်များအကြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ သူတို့ဆက်စပ်နေသလား။
အင်တာနက်နှင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကယင်းကိုငြင်းဆိုရန်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော်လူအများကဒစ်ဂျစ်တယ် detox ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါလူတို့၏နေ့စဉ်အပျော်အပါးများကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှရောဂါလက္ခဏာများမှာမကြာခဏပေါ်လာတတ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းအကူအညီလိုအပ်သည့်အသက်အရွယ်မရွေးလူ ဦး ရေ ၄၇,၃၀၀ အထိတိုးများလာခဲ့ပြီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာဆယ်ကျော်သက်များဖြစ်သည်။
NHS အင်္ဂလန်ရှိအမျိုးသားစိတ်ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Claire Murdoch ကဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် -“ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူမှု၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောစောင့်ရှောက်မှုတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကိုဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်နေသည် အဆိုပါ NHS အပိုင်းပိုင်းကောက်ဖို့ကျန်ကြွင်းသည်မဟုတ်။ "
မာရိကရှပ်အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အပြုအမူပေါ်မှာဤအလွန်အားကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကိုးကားထားသည်။ သတိပေးချက်: ဤအကြောင်းအရာသည်အချို့သောစာဖတ်သူများစိတ်ပျက်စရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေးသောပစ္စည်းပါရှိသည်။ 27 စက်တင်ဘာလ 2019 ထုတ်ဝေသည်။
ဘယ်လိုလွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း sanitized နေပါသည်
ကောင်စီများ၏အရေအတွက်သည်ညစ်ညမ်း၏ကျယ်ပြန့်ပျက်ဆီးဖို့အာရုံကိုဆွဲရန်ပျက်ကွက်သောကလေးများနှင့်လူငယ်များမှာရည်ရွယ်သံသယရှိသူလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးလမ်းညွှန်မှုထုတ်လုပ်ပါပြီ။ Jo BARTOSCH သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
Jessica REDDING ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအသေခံရ၏ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကောင်တီ Coroner သူမက 40 နှစ်အရွယ်မှာကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
သူမသည်နာမကိုအမှီဂျက်စီကာ Jaymes အောက်မှာညစ်ညမ်းအတွက်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သူမ၏အရွယ်မတိုင်မီသေခံခြင်း euphemistically ပုလို့ခေါ်ပါတယ်အဘယျသို့ရှိသူတို့အဘို့အပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး "အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်။ "
သူမကပဲ 16 အခါ Redding အတွက်ဖျော်ဖြေပထမညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်, Little ကမိန်းကလေးပျောက်ဆုံးသွားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ဂျက်စီကာ Redding ၏ကိုယ်ကဒီမှာဗြိတိန်မှာအနည်းဆုံးကောင်စီက်ဘ်ဆိုက်သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်များတွင်ပြုမူလာသောအခါ Redding သူတို့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ Hang-ups ကျော်ရရန်လိုအပ်ကြောင်းထက်အငယ်လေးတွေပြောပြသည် Los Angeles မှာ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာစောင့်ဆိုင်းဘော်သကဲ့သို့ ညစ်ညမ်း။
Warwickshire ကောင်တီကောင်စီရဲ့ လမ်းညွှန်မှု "သင့်ကိုယ်သင်လေးစားပါ"ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Warwickshire အားဖြင့်ထောက်ခံသော, helpfully ကညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီအဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်ဘယ်အရာကိုတွေဆီကနေထွက်သတ်မှတ်။
Warwickshire ရုံတစျခုကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများရည်ရွယ်သံသယရှိသူလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးလမ်းညွှန်မှုထုတ်လုပ်ကြဖို့အများကြီးကောင်စီသည်။
တချို့ကစာဖတ်သူများစိတ်ဝင်စားစရာ (ပွဲတစ်ပွဲသူတို့မြင်ရပါတယ်အဘယျသို့န်းမှာများနှင့်လိင်ကျောင်းများတွင်မိန်းကလေးငယ်များတိုက်ခိုက်ရန်ယောက်ျားလေးများတစ်ခုကပ်ရောဂါမှဦးဆောင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သားသမီးများ၏ပြဿနာကြောင့်လိင်သူတို့ရဲ့နားလည်မှုလှဲကြောင်းကြောင်းကိုစိတ်ကူးစေခြင်းငှါ, 521-2013 အကြား Warwickshire ရာခိုင်နှုန်း 16 တိုးကျောင်းများမှာ "သက်တူရွယ်တူရွယ်တူပေါ်တွင်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု).
အခြားသူများကိုးကားစေခြင်းငှါ, labiaplasties ထ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီးငယ်များ၏ရာခိုင်နှုန်း 40 အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ထိခိုက်ကြောင်းရိပ်လက္ခဏာအဖြစ်, လိင်ရှိသည်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရသတင်းပို့ပါ။
နှစ်ဦးစလုံးမှားပါလိမ့်မယ်, စိတ်ချလက်ချတဦးတည်းကဤသို့ဆိုပြီးသောလေးစားသင့်ကိုယ်သင်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း "porn ကိုကြည့်လူငယ်များများအတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာကသူတို့က 'လုပ်နေတာမဖြစ်သင့်' 'တစ်ခုခုအဖြစ်ရှုမြင်ရဲ့ဖြစ်၏။ "
ပုံရသည်သူတို့ရဲ့သနားစရာကြိုးပမ်းမှုမှာ "ချ wiv da လေးတွေ," ဤကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်ချက်နောက်ကွယ်မှသူတွေကိုမသိဘဲ, porn-addled misogynists အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပျနှံ။
စောင့်ကြည့်အကြံပြုဝံ့သူကိုဝေဖန်သူများက "လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံစအိုသင်တန်းဆရာ 2", "အားလုံးစအို 3" သို့မဟုတ် "တစ်ဦးကိုညဉ့်အဘို့အ Slave" (ပုဖျောပွနှောင်းပိုင်းကဂျက်စီကာ Redding အပေါငျးတို့သရောင်းအားအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်) အဘယျကျန်းမာကြားဆက်ဆံရေးအသွင်အပြင်တစ်ခုကလေး၏နားလည်မှုကြွယ်ဝစေမပြုစေခြင်းငှါ တူ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကောင်းတစ်ဦးမြင်တတ်သော-ဖို့လိုအပ်နေဖြစ်ကောင်းနေသော Out-of-touch နဲ့ပုလဲ-ဆုပ်ကိုင် prudes ဖြစ်ကြသည်။
တကယ်တော့များစွာသောအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများညစ်ညမ်း၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒီတော့ညံဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကြောင့်လိင်တစ်ဦးစစ်မှန်အဓိပ္ပာယ်မှလက်ျာ၏အိုင်ဖုန်းမျိုးဆက်လုယက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်ရသောအခါ တစ်ဦး 12 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုယ်သင်လေးစားရန်ရေးသားခဲ့သည်သူမကညစ်ညမ်းစွဲနှင့်သူမအဘို့ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ထုတ်ဖော်ခဲ့စိုးရိမ်ပူပန် "ဝက်ညဉ့်" ဟုတုန့်ပြန်ကြောင်းညစ်ညမ်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးမဟုတ်သလိုကြောင့်လိင်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုသောအရာကိုသူမမဟုတ်ခဲ့ပုံဖော်ကြောင်းသူမ၏စိတ်ချဖို့ပဲသူမ၏ပြောပြရန်မဟုတ်ခဲ့ လူကြီးအဖြစ်မျှော်လင့်ထားပေလိမ့်မည်။
ယင်းဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှရိ Sharp က, ချစ်ခြင်း, လိင်နှင့်အင်တာနက်ကိုအာရုံစိုက်ကာပညာရေးပရဟိတအဆိုအရ, ဒီရိုးရှင်းစွာစစ်မှန်သောမဟုတ်ပါဘူး။
ဂါးဒီးယန်းများအတွက်အင်တာဗျူးယခုနှစ်အစောပိုင်းကခုနှစ်တွင်သူမကရှင်းပြခဲ့သည်: "ပိုလျှံ porn ကလေးများကိုလိင်ဖြစ်လာဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပါတယ်နှိုးဆော်ခြင်း ... သူတို့စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းခြင်းနှင့်စှဲဖို့အန္တရာယ်အရှိဆုံးပါပဲသည့်အခါတစ်ဦးနှစ်အရွယ်တွင်။ အများစုမှာစှဲနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စတင်ပါ။ "
ဒီ၏ရလဒ်များအတွက်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများအခမဲ့-streaming များ, high-definition porn ၏ထွန်းကတည်းကရာခိုင်နှုန်း2န်းကျင်မှ3အတွက် 35 အောက်မှာယောက်ျားရာခိုင်နှုန်းခန့်မှန်းခြေ 2002-30 ကနေတိုးပွားလာသော။
တခြားနေရာ site ပေါ်တွင်တစ်ဦး "ဆက်ဆံရေးမျိုးပဟေဠိ" သူတို့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ဖမ်းမိလျှင်အလားအလာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုစာရင်းထဲကရွေးချယ်ဖို့အသုံးပြုသူများကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
လက်တွေ့ကျကျကျနော်တို့က "ဖက်" ညစ်ညမ်းအထီးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ကိုကြည့်သိသော်လည်းရွှင်ပြလန်းဆန်းကိုယ်သင်လေးစားပါ "နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ porn စောင့်နေကြလော့။ " ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး
လူတိုင်းအတွက် "ဟုဆော့ likes ။ " ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင် option ကို "ပူရဲ့" "ဒါကြောင့်လျော့နည်းသွားစေမယ့်" သို့မဟုတ်ရှေးခယျြဖွစျစေ, အဖြေဘေးဖယ်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင်မပြေထားရန်ဖြစ်ပါသည်
"တစ်ဦးဆော့" ပြဿနာမဖြစ်ဘဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, တဦးတည်းရဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ်တစ်ဦးမိတ်ဖက်များကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏နှိမ်နင်းသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဝေးပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွလူတွေဆောင်ခဲ့ရာမှ, ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဆက်ဆံရေးမျိုးချိုး-ups အတွက်သော့ချက်အချက်.
ညစ်ညမ်းဆိုက်များလည်ပတ်မှုပေါင်းစပ် Netflix, Amazon နဲ့ Twitter ကိုသူတို့ topping နှင့်တကွ, လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းခြောအဆိုပါ Warwickshire ၏နှိုးရာမှလူထုဆက်ဆံရေးအကူအညီမပါဘဲရှင်သန်လိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အလေးစားသင့်ကိုယ်သင်လမ်းညွှန်မှုကိုရှင်းပြခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တရားမျှတစွာပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအလုပ်မ: "။ အဆိုပါလိင်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အများကြီးပိုငွေရှာရသောအနည်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်"
တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောလူနည်းစုအဘို့ဤစကားမှန်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Sheena ကို Shaw ကိုယူပါ။ သူမသည် "အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီrosebudding ၏မိဖုရား။ "
Rosebudding စအိုလမ်းကြောင်းစအိုထဲကအတင်းအဓမ္မဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရစအို prolapse, များအတွက်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
"ယဉ်ကျေးမှုကိုအဘယျသို့ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုကြိုက်ဖို့မသင်ပေးတယ်။ ": ကို Shaw ဒါထိထိမိမိမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်ဤပုံ sexy ဖြစ်ပါတယ်
ဒုမဂ္ဂဇင်းသူမကတစ်ဦးဒဏ်ရာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လုပ်နိုင်အဘယ်သို့သောအကြောင်း Shaw ကမေးတဲ့အခါသူမက replied: "အဘယ်သူမျှမတအစဉ်အဆက်အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ကကိုယ်တော်သည်ဤမြင်ကွင်းများကိုပြုမပြုမီသင်ကစွန့်လွှတ်လက်မှတ်ထိုးစေ။ သငျသညျလုံးဝလုပ်သားများ '' comp ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ "
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် unsurprisingly ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များ, သောစက်မှုလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာစွန့်ခွာသောသူတို့အားပေးသနား မူးယစ်ဆေးဝါး, အလွဲသုံးစားမှုနဲ့အကျပ်ကိုင် အစုံပေါ်တွေထူပြောနေတယ်ဆိုပြီး; အမျိုးသမီးအများစုမထွက်ခွာမီသုံး 18 လအတွင်းအကြားကြာရှည်။
သင့်ရဲ့ rectum ကိုခေါ်ခံရစဉ်သင့်ရဲ့စအိုကိုထုတ်ပြီးမှရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားပေးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါသည်, ရဲ့ရိုးသားဖွစျပါစေ "ပြည်တန်ဆာ" မှာတံထှေးနှငျ့ထှေးနှင့်ကင်မရာကိုအပေါ်ဆို့။
ဤအရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြစ်ရပ်မှန်များနေသော်လည်းယင်းကိုလေးစားသင့်ကိုယ်သင်က်ဘ်ဆိုက်တောင်းဆိုမှုများအဲဒီလေ့လာမှုများရည်ညွှန်းကြသည်မဟုတ် "လေ့လာမှုများတကယ်တော့အမျိုးသမီး porn ကြယ်ပွပျမ်းမျှလူဦးရေထက်ပိုမိုမြင့်မား Self-လေးစားမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်ကျေနပ်မှုရှိသည်။ ကြောင်းပြသ" ။
သို့သော်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များရဲ့ဒုက္ခအပျေါမှာတညျဆောကျတဲ့လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ sanitisation ခှငျ့မလှတျဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ, လူငယ်-အာရုံစူးစိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပုံရသည်မှ၎င်း၏မစ်ရှင်များတွင် Warwickshire ကောင်တီကောင်စီညစ်ညမ်းအတွက်ပုံဖော်အဆိုပါအလွဲသုံးစားမှုပုံမှန်ပေမယ့်နှစ်လိုဖွယ်မသာကြောင်းထင်နေတဲ့မျိုးဆက်မြောကျမတို့အန္တရာယ်များ။
jo Bartosch ဟာ Off ကိုကလစ်နှိပ်ပါဒါရိုက်တာညစ်ညမ်းဝယ်လိုအားကိုအဆုံးသတ်မယ့်ကမ်ပိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လှူဒါန်းခြင်းစဉ်းစားပါ ကျေးဇူးပြု. www.clickoff.org.
မာရိကရှပ် 19 ဧပြီလ 2019 အပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, ပေတရုစိန်ဖွငျ့ဤအပိုင်းအစထဲမှာကျယ်ကျယ်ကိုးကားထားသည်။
ဗြိတိန်တွင်လာမည့် '' porn ပိတ်ပင်တားဆီးမှု '' ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများကကြိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဘုရားကျောင်းအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။
ကက်သလစ်လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ကြောင့်ဖြစ်သောဗြိတိန်တွင်ညစ်ညမ်းတခုတခုအပေါ်မှာလာမည့်အသက်အရွယ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ကြိုဆို, နှင့်ဘုရားကျောင်း porn စွဲများ၏ပျက်ဆီးတိုက်ဖျက်ရေးအပေါ်တစ်ဦးဦးဆောင်ယူနိုင်ပါသည်ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ porn sites များအတွက်အသက်အရွယ်-စိစစ်အတည်ပြုဇူလိုင်လ 15 အပေါ်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းယခုသီတင်းပတ်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
မိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့လူကြီးများ porn ကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘောက်ချာကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သူတို့ 18 ကျော်သက်သေပြရပါလိမ့်မယ်။
Matt Fradd US မှာညစ်ညမ်း၏ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကက်သလစ်စာရေးသူနှင့်စပီကာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာမကြာသေးမီကညစ်ညမ်းစွဲများ၏ပျက်ဆီးခြင်းမှကလူကိုကယ်နှုတ်သောသစ်တစ်ခု 21 နေ့အစီအစဉ်ကို Strive21 စတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
"ငါသည်ဗြိတိန် porn ပိတ်ပင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒါဟာ porn ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေလူငယ်များကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာယခုကြှနျုပျတို့မိတ်ဆက်အဟန့်ဒီလိုမျိုးမြင်နေရသည်။
"ဒီဘုရားကျောင်းညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်သည်စစ်တိုက်ကစားရန်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ကက်သလစ်အနနေဲ့ဘာသာရေးအမေးအဖြစ် 'ငါတို့ဘုရားသခငျ၏ပုံရိပ်နှင့်သဏ္ဍာန်ဖန်တီးခဲ့ကြ' နှင့်သောကြောင့်, ဒီကကျနော်တို့ကလူကိုစဉ်းစားပုံကိုပြောင်းလဲဆိုပါတယ်။ ဒီအထူးသဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်ဘုရားကျောင်းသင်ကြားမှု porn ကိုကျနော်တို့ enslaves သောငါတို့ကိလေသာ၏မာစတာဖြစ်ဟုခေါ်ကြသည်ဖြစ်၏။ "
မစ္စတာ Fradd ကဆက်ပြောသည်: "Porn အသုံးပြုမှုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာပါတယ်နှင့် 8-12 အသက်ပါဆုံးကလေးများ porn ကြည့်ရှုနေကြသည်ကိုသူတို့အခြေခံအားဖြင့်ကျနော်တို့အပြည့်အဝကလိုင်းချ 50 နှစ်ပေါင်းသည်အထိသည်မည်မျှအန္တရာယ်ကိုသိမည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုခု guinea ဝက်ဖြစ်ကြသည်။
"ကျွန်မကတကားဟု 50 နှစ်အတွင်းကလူစိတ်ပျက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်လိမ့်မည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်ထင် '' သင်ဤလုပ်နိုင်ဘယ်လိုသင်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပစ္စည်းပစ္စယစောင့်ကြည့်ကြကုန်အံ့နိုင်ဘူး။ ''
Strive21 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ် US မှာဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ပြီးသား 1,000 လူတို့သညျ porn-စွဲအစီအစဉ် sign up ကိုနှင့်ကက်သလစ်ကျမ်းစာသင်ကျောင်း tool ကိုသုံးပြီးစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့သည်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အနာရောဂါငြိမ်းစရာဓမ်မအမှု၌ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ဦးကစကော့တလန်ယဇ်ပုရောဟိတ်လည်းတိုက်ခိုက်ရေး porn စွဲကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မဆိုပိတ်ပင်မှုကြိုဆိုခဲ့သည်။
Canon ၏ဝီလျံ Fraser, Taynuilt အတွက်ခရီးစဉ်ဘုရားကျောင်း၏စီရင်စုနယ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကပြောပါတယ်: "ဝမ်းနည်းစရာငါဝန်ကြီးဌာနကငြိမ်းစေလျက်၌ငါ့အလုပ်ကတဆင့်စွဲများ၏ပျက်ဆီးမြင်ကြပြီ။
"ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲ porn သူ့ဟာသူမှတဆင့်ပေမယ့်တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအလေ့အထဖြစ်လာ '' ကိုထိခိုက်စေ။ '' ဤသည်ကသောက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏမထက်ကို 'ကိုထိခိုက်စေ' 'တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနာကိုငြိမ်းစေလျှင်ထို့နောက်၎င်းသည်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာရှိမရှိစွဲမဆိုပုံစံနှင့်တူ၏' 'အလေ့အထ။ ' "
Canon ၏ Fraser တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲထံမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုတဦးတည်း session တစ်ခုယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ '' လွန်ကဲမှုကိစ္စ '၌ဖြေရှင်းရန်အနှစ်ပင်လပေါင်းများစွာယူသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်' 'ကိုဖယ်ရှားပစ်' 'ရန်သူကဆက်ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကအဆက်မပြတ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအတွင်းတည်ရှိသောတန်ခိုးတော်ကမ္ဘာပေါ်မှာမဆိုအာဏာကိုထက်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုသတိပေးခံရဖို့ရှိသည်," ကို Canon Fraser သူလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာရှိသမျှအပြစ်တရားရှုံးနိမ့်မယ့်တူသော 'ဘုရားသခငျအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ထားလိမ့်မည်ဟုပြောသည်။ ''
porn တစ်£ 75 ဘီလီယံအထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Eastern Economic ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတစ်ဦးက 2016 လေ့လာမှု porn ရှုမြင်သူတွေကိုမှန်မှန်မကျင့်သောသူထက်လက်ထပ်ရန်လျော့နည်းများပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
မစ္စရှပ် said: "ကျနော်တို့အဝင်ဥပဒေပြု၏မျက်နှာသာအတွက်လုံးဝဖြစ်ကြသည်။ မိဘများမကြာခဏ porn က 20 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်သကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ထင်ပေမယ့်ယခုအများကြီးပိုဆိုးသည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်တွေအများကြီးမောင်းနှင်နေသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမစ္စရှပ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထောက်ခံထားပါတယ်, ဒါကြောင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကက်သလစ်ကျောင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကသစ်ကိုဥပဒေပြဌာန်းအရေးကြီးသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာပြဿနာကိုပျောက်ကင်းစေမယ့်မပေမယ့်ပညာရေးကျောင်းများနှင့်နေအိမ်များအတွက်အရေးပါသောအဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကဆိုသည်။
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ကဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏မတ်ေတာအစီအစဉ်အရင်းအမြစ်များသွန်သင်ချက်နှင့်အညီသူတို့ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကက်သလစ်သူတို့, အပါအဝင်စကော့တလန်အနှံ့ကျောင်းများအတွက်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ, ဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။
"ချာ့နှင့်အသင်းတော်နယ်ပယ်ကိစ္စကိုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်ကက်သလစ်ပညာပေးရန်အရေးကြီးသည်နှင့်ဘုရားကျောင်းရုံထိုကဲ့သို့သောပြဿနာကွာ-သူတို့သည်ကောင်းသောအထဲ၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်နားထောင်ရန်နှင့်ပြုမူရန်ရှိသည်များနှင့်သူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ဒါကြောင့်သူတို့ကိစ္စအပေါ်ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်သွားလိမ့်မည်ဆုတောင်းပဌနာလို့မရပါဘူး။ "
မာရိသညျယဇျပုရောကိုလည်းပြဿနာအပေါ်မပြောတတ်သို့မဟုတ်အကူအညီတောင်းသွားကြဖို့ဘယ်မှာပေါ်ကလူအကွံဉာဏျပူဇျောဖို့ '' အာဏာအပ်နှင်း '' နိုင်ကဆက်ပြောသည်။
မိန့်ခွန်းစည်းရုံးလှုပ်ရှားလွတ်လပ်ခွင့်သို့သော်သစ်ကိုဥပဒေပြဌာန်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပေါ်တစ်ဦးညှပ်ဆင်းကိုမြင်ရလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ porn ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့်အမုန်းစကားအွန်လိုင်းအဖြစ်ယူဆသောအရာကိုကန့်သတ်ရန်ပိုမိုကျယ်ပြန်အစိုးရကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
စကော့တလန်အတွက်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက "ဒါဟာ '' အွန်လိုင်းပျက်ဆီး 'နဲ့' ထိုးစစ်ပစ္စည်း '' ကိုင်တွယ်ရန်တပါတည်းယူဆောင်မည်သည့်သစ်ကိုဥပဒေပြဌာန်းတဲ့ကြံ့ခိုင်လဲလှယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်, အတွေး, သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်ဘာသာရေးရန်အခြေခံပိုင်ခွင့်ကိုစောင့်ထိန်းကြောင်း, မရှိမဖြစ်အရေးပါသည် အမြင်များနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ကြောက်ရွံ့သို့မဟုတ်မျက်နှာသာမရှိဘဲ။
"ကလေးများနှင့်အားနည်းချက်အုပ်စုများ၏အွန်လိုင်းလုံခြုံမှုကိုလုံခြုံအောင်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ '' ပျက်ဆီး '' တစ်ဦးရည်မှန်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏မရှိခြင်းအတွက်သို့သော်သူကဤအမှုကိုပြုသောစေခြင်းငှါဘယ်လိုကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်။ "
"လွတ်လပ်တဲ့ထိန်းညှိအကြောင်းအရာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်နဲ့အလားအလာကတားမြစ်, သီအိုရီဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပေါ်ကန့်သတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ခွင့်ပြုခြင်းသည်။ "
စကော့တလန်ရဲ့ကက်သလစ်မိဘခန္ဓာကိုယ် porn ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကြိုဆိုခဲ့သည်။
jo ပျံဝဲသည်စကော့တလန်ကက်သလစ်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုရဲ့မိဘများ '' အုပ်စုတစ်စု၏ကုလားထိုင်က "သစ်ဥပဒေပြဌာန်းက ပို. ခက်ခဲကလေးများဖြစ်စေမတော်တဆသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတွေအအွန်လိုင်းမသင့်လျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုရယူဘို့လုပ်သင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးလူနေမှုပုံစံစတဲ့မူးယစ်ဆေးအဖြစ် Viagra မာရိသညျရှပ်3ဧပြီလ 2019 မှဤ Huffpost လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကိုးကားကိုမြင်တော်မူ၏။
'သူတို့ကကလပ်တစ်ခုကိုမသွားခင်ယူကြ' '- ဘာကြောင့် Viagra ကိုမျိုးဆက်သစ်များကအသုံးပြုနေရသနည်း
မရှိတော့အသက်ကြီးများအတွက်ရုံမူးယစ်ဆေး, Viagra ဟာသူတို့ရဲ့ချုပ်ထဲမှာယောက်ျားလေးများအားဖြင့် recreationally အသုံးပြုနေပါသည်။ အားဖြင့် ဆိုဖီ Gallagher
ဒါဟာအဲလက်စ် * ပေါ်တွင်ကွန်ဒုံးထားရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတတိယအကြိမ်ကြီးမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ နှိုးဆော်ခြင်းခံနေသော်လည်းနှင့်ဤဖြစ်ကောင်းသူအစောပိုင်းကညနေပိုင်းတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးင်မိနျးမနှငျ့လိင်ဆက်ဆံရန်သူ၏သာအခွင့်အလမ်းကြီးသူစိုက်ထူမနေနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိ။ သူ့ဦးနှောက်လိင်ရှိသည်ဖို့လိုချင်ဘယ်လောက်နေပါစေ, သူ့ခန္ဓာကိုယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။
နောက်ဆုံးတွင်သူသည်အခြေအနေကလက်ခံခဲ့သည် "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်" သူ့ယနေ့အထိတောင်းပန် - အရက်နှင့်ကင်းတဲ့ကော့တေးအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားလုပ် - ကနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ပါစေခြင်းငှါမကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နက်ဖြန်နေ့၌သူသည်ဓာတုဗေဒပညာရှင်ထံသို့ ဝင်. နှင့်ပိုပြီးလေ့ Viagra အဖြစ်လူသိများ 8 sildenafil Tablets, တစ် packet ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
အဲလက်စ်, သူ့လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်တစ်ဦး Viagra အသုံးပြုသူများ၏အသွင်မြင်လာအောင် fit မပါဘူး: လူ့အဖွဲ့အစည်းနေဆဲဖြစ်နိုင်သည်နေမကောင်းကျန်းမာရေးနှင့်အတူအဟောင်းများလက်ထပ်ယောက်ျားနှင့်ဝသကဲ့သို့ပြောရလျှင်အပြာရောင်ဆေးလုံးကိုမြင်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်နာမကျန်း-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူခံစားနေရပြီး။ ဒါပေမယ့်အဲလက်စ်ရဲ့အမှုနှင့်ထိုပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှ Viagra သုံးစွဲဖို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ, ဝေးထူးခြားတဲ့ထံမှဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Viagra ဆေးစာမပါဘဲဗြိတိန်တွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းက 12 လအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဝါး, ယောက်ျားသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားဘယ်အရာကိုဆေးဝါးသူတို့ယူစေခြင်းငှါအပျေါအခွခေံအမှတ်တံဆိပ် '' တဲ့ Viagra Connect ကို '' အမည်ရှိနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Pfizer ဖွငျ့, မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်။ 2018 အတွက်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုနိုင်စွမ်းတိုးပွားလာ၏အရေအတွက်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အခါအဆိုပါကနဦးရည်ရွယ်ချက် အတု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးပြား တရားမဝင်အွန်လိုင်းကိုရောင်းမခံရ။ ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းစျေးကွက်၏အသစ်တစ်ခု segment တစ်ခုသို့မူးယစ်ဆေးမိတ်ဆက်များ၏ဖြစ်ကောင်းမမြင်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Murray Blacket, မြောက်ဘက်လန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးသူတစ်ဦး "အာမခံပေါ်လစီသည်" သို့မဟုတ်အိပ်ခန်းထဲမှာအသက်တာကိုတစ်ဦး "အာနိသင်တိုးမြှင့် shot" တဲ့ Viagra ယူပြီးပိုပြီးလုလင်တို့သည်မြင်လျှင်ကပြောပါတယ်။ သူတို့အထဲကတစ်ဦးညဥ့်သွားမတိုင်မီမကြာခဏဒီဖြစ်လိမ့်မည်။
"ကျနော်တို့ကလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အကြောင်းပြောဆို chemsex မြင်ကွင်းတစ်ခု ဒါပေမယ့်ဖြောင့်မြင်ကွင်းတစ်ခု၌သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအတူတက်ချိတ်ဘယ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတနင်္ဂနွေ၏ညီမျှလည်းမရှိ, ကင်းခြင်းနှင့် Viagra ၏ဝန်ယူယုန်ပေါက်ဆင်း, တနင်္လာနေ့ထွက်လာကြ, "Blacket ကပြောပါတယ်။
အဖြစ်အစောပိုင်းကမြင့်မားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရောင်းချခဲ့သည်ရှစ်လမတိုင်မီသြဂုတ်လ 2017, UK ရှိဆရာဝန်များအဖြစ် သတင်းပို့ခဲ့သည် အမည်ဝှက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သို့မဟုတ်အဲလက်စ်ကဲ့သို့ခက်ခဲတစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုပ်သောအခြားအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသုံးပြုမှုကိုတန်ပြန်ရန်တစ်ဦးလေလံအတွက်အင်တာနက်ကိုကျော်မူးယစ်ဆေးဝယ်ယူလူပျို၏ကြီးထွားလာသောလမ်းကြောင်းသစ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံကလူတွေဥရောပ, အမေရိက, သြစတြေးလျသို့မဟုတ်ကနေဒါတခြားနေရာတွေထက်ပိုများပါတယ်, မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလိင်ပေါင်းစပ်ဖို့အဆိုပါ 2019 ကမ္တာ့မူးယစ်ဆေးစစ်တမ်းအရသိရသည်မသက်ဆိုင်ကျားသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏။ မြင့်မားသောဆေးများအတွက်ယူလျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတားစီးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပေးသောများ - ကိုအသုံးပြုအသုံးအများဆုံးတ္ထုများအရက်, ဆေးခြောက်, MDMA နှင့်ကိုကင်းဖြစ်ကြသည်။
Viagra စိုက်ထူစောင့်ရှောက်စေခြင်းလိင်တံအတွင်းလုံလောက်သောသွေးစီးဆင်းမှုမရှိစေရန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာတစ်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ရှိသည်နှင့်လူကိုလိင်နှိုးဆွသောအခါမှသာအလုပ်လုပ်တယ်မထားဘူး။ ဒါကြောင့်သင်အဆုံးပေါ်နာရီတစ်ခုစိုက်ထူနဲ့နိုက်ကလပ်တဝိုက်လမ်းလျှောက်ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်သင်ကညဥ့်ရဲ့အဆုံးမှာကံကောင်း get လျှင်အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဆရာ, ဆရာမ, ရှေ့နေများ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာ - Blacket ကယူပြီးလုလင်အများအပြားပညာရှင်များဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ Viagra ကတစ်ချိန်ကခဲ့သကဲ့သို့စျေးကြီးသည်မဟုတ်, နေဆဲရှစ်များအတွက်လေးတက်ဘလက်ဗူးသို့မဟုတ်£ 19.99 များအတွက်£ 34.99 မှာရောင်းချပေး။ တစ်ဦး '' ကိုယ့်အမှု၌ 'ထိရောက်စွာ, အဘယျအဘို့စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး။
"လူပျိုတို့ကို ပို. ပို. ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အတွက်ဒါယုံကြည်မှုမဟုတ်," Blacket ကပြောပါတယ်။ "ဒီကလူပဲယုံကြည်မှုတစ်ခုထပ်တိုးအဖြစ် Viagra ယူပါ။ ဒါဟာပိုပြီးစွန့်စားလိင်ဆက်ဆံအကြောင်းကိုမယ့် - ဒါကြောင့် '' ပုံမှန်လိင် '၌လုပ်ဆောင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပဲဖွင့် "။
ယုံကြည်စိတ်ချမှု၌ဤကျဆင်းမှု မကြာခဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည် မှန်မှန်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်လူများ၏အရေအတွက်မြင့်တက်အတူ။ လုလင်% 14% အကြားနှင့် 35 တွေ့ရှိခဲ့မကြာမီကလေ့လာမှုများသူတို့2မတိုင်မီ 3-2008% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ erectile disfunction တွေ့ကြုံခံစားပြောကြပါတယ်။ ယင်းမာရိရှပ် ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာပရဟိတမတ်ေတာ, လိင်နှင့်အင်တာနက်ကိုအာရုံစိုက် ဂါးဒီးယန်းပြောသည်: "အခမဲ့-streaming များ, high-definition porn ဒီတော့အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သောအခါ 2008 ကတည်းကကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ "
ပြောင်းလဲနေသောချိန်းတွေ့ရှုခင်းကိုလည်းဆော့ကစားမယ့်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ် "ဟု Blacket ချိန်းတွေ့ apps များ၏တိုးတက်မှုနှင့်လူမျိုးကိုလိင်အထင်ကြီးဖို့ရှိသည်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူစောဒကတက်သည်။ "ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ကောင်းကောင်းမသွားဘူးလျှင်ကလူအပေါ်ကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးဖြည့်ဆည်းနိုင်," ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒီတစ်ညရပ်တည်ချက်ယဉ်ကျေးမှုကြောင်းကိစ်စတှငျအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တဦးတည်းအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ "
အမြဲလိင်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အဲဒီမှာပိုပြီးဖိအားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကများ၏အများစုသည်အရက်၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တားစီးသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြကြသည်သာ။ "ဒီယောက်ျားဒါမကြာခဏအဖြစ်ကောင်းစွာမူးယစ်ဆေးဝါး, အချိုရည်ပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါ Viagra ယူပြီး '' ငါကပိုအနည်းငယ်ပိုင့်ရှိသည်နိုင်နဲ့ကျွန်မနေဆဲထိုသို့ပြုမှနိုင်ပါလိမ့်မယ် '' ၏အတွေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပုံရသည်။ "
Viagra အဓိကယဉ်ကျေးမှုပိုမိုထူထောင်ဖြစ်လာအဖြစ်ထိုအတွေးပိုခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည် Blacket ကပြောပါတယ်။ "ယခုရှိပါတယ်တဲ့ Vespa အပေါ် [ကယ်နှုတ်တော်မူ၏] ကမြေအောက်ပေါ်နှင့်တစ်ဦး Viagra များအတွက်ဘတ်စ်ကား၏ဘေးထွက်အပေါ် adverts ။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုမြင်ကြပြီကြောင့်အပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်။ "
ဒါဟာသင့်ရဲ့တံခါး Viagra ဆောင်ကြဉ်းနေတဲ့ Deliveroo-စတိုင်ကုမ္ပဏီလူငယ်များဖို့မူးယစ်ဆေးကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်အောင်အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားထားပြီးရှိခြင်းပုံရသည်။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့အဖေရဲ့ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ကနေခိုးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုခုထက်သင်တစ်ဦးပီဇာလိုလမျး၌ကအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းကုန်ပြီ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Viagra သူတို့ကို "ပင်ခက်ခဲ" ဖြစ်စေခြင်းနှင့်လိင်ကပိုပျြောမှေ့စမယ်လို့ယူပြီးထင်တဲ့သူစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. မပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူယောက်ျား၏လက်တဆုပ်စာကိုမြင်လျှင် Blacket ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။
Viagra ကိုအပန်းဖြေရန်ရွေးချယ်သူအချို့သည်သူပုံမှန်အားဖြင့်အကြံပြုသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများကိုယူရန်စိုးရိမ်မှုများရှိနေသည်။ လူအများစုက ၁၀၀ မီလီဂရမ်ဆေးတွေကိုသောက်ကြပြီး NHS ကတစ်ရက်တစ်ခါ ၅၀ မီလီဂရမ်သောက်ဖို့အကြံပြုတယ်။ “ လူတွေကဆေးတွေကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမသိကြဘူး။ သူတို့ကဗီတာမင်တွေပိုသောက်ရုံပဲရတယ်။ ” သူကရှင်းပြသည်
အလွန်အကျွံ sildenafil ယူပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်း, မူးဝြေခင်း, ရင်, ပိတ်ဆို့နှာခေါင်းနှင့်ပြောင်းလဲရူပါရုံကဲ့သို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ "ငါသည်သူတို့ကနောက်နေ့ခံစားခဲ့ရပုံကိုသူတို့ထဲကတချို့ကိုမေးမြန်းပါတယ်သူတို့တော်တော်လေးကြမ်းတမ်းပြောပါ" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "သူတို့ထဲကတစ်ဦးအနည်းငယ်ငါ့ထံသို့ လာ. မေးလျှင် '' ငါသည်အစိုးရိမ်သင့်ပြီလော အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်အဘို့ဤပွုနိုငျသနညျး "
ဒါဟာသူ့ကိုလူတွေကသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝဟန့်တားကြသည်ပိုကြီးတဲ့, ပိုမိုနက်ရှိုင်းအမြစ်တွယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အင်္ဂတေဖို့ဆေးပြားကိုအသုံးပြုနေကြောင်းစိတ်မပူပါနဲ့စေသည်။ "သူတို့က Viagra နှင့်အတူပြဿနာကိုအုပ်စိုးတီးဝိုင်းအကူအညီချပြီးပါတယ်။ ဒါကယာယီပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ "
အဆိုပါဂါးဒီးယန်းအတွက်မတ်လ 11 ပုံပြင်ထဲမှာသူ Mary ရှပ်ထံမှ quotes ကက်သလစ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဤအပိုင်းအစ၌ထငျရှား LifeSiteNews။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ကျွန်တော် neurosurgeon ဒေါက်တာ Donald ဟီလ်တန်နှင့် yourbrainonporn.com အပါအဝင်လေးစားသတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကား။
မတ်လ 29, 2019, (LifeSiteNews) - Young ကယောက်ျားလိင်ဖျော်ဖြေဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်နေ, မကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူတို့၏ဦးနှောက် rewires အဖြစ်မိန်းမနှင့်သဘာဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးထဲသို့မဝင်ရ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုလုယက်လျက်ရှိသည်။
တစ်နည်းအား၎င်းတို့၏ 30s မှတဆင့်၎င်းတို့၏ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အထီးရငျးနှီးဆန့်ကျင်, ပှားဆန့်ကျင်ခြင်း, ချစ်ခြင်းဖော်ပြဆန့်ကျင်, အိမ်ထောင်ဆန့်ကျင်, ပျော်ရွှင်မှုကိုဆန့်ကျင်, လိင်ဆန့်ကျင် inoculated လျက်ရှိသည်။
ယင်းမာရိရှပ် "2002, ED နှင့်အတူ 40 အောက်မှာလူဖြစ်ပွားမှု (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) 2-3 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်ခဲ့အချိန်အထိ" ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ ကိုပြောသည် အုပ်ထိန်းသူ။ "အခမဲ့-streaming များ, high-definition porn ဒီတော့အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သောအခါ 2008 ကတည်းကကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ "
"(P) orn ကလေးများကိုလိင်နှိုးဆွဖြစ်လာဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပါတယ်" ဆက် ရှပ်, ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူတို့ကစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းခြင်းနှင့်စှဲဖို့အန္တရာယ်အရှိဆုံးပါပဲသည့်အခါတစ်ဦးနှစ်အရွယ်တွင်။ အများစုမှာစှဲနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စတင်ပါ။ "
အဆိုပါဂါးဒီးယန်းဆောင်းပါး "လူပျို၏တတိယအထိယခု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစား။ " ကြောင်းအကြံပြု
"Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်" (PIED): အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့်နာမည်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုံစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
"မယ့်အစားတကယ်ကလူအားမိမိလိင်စိတ်နိုးထ wiring ၏ယနေ့ဖွင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမကြာခဏမျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, သူသည် voyeurism ထက်ပါဝင်မှုဖို့, သူ့အခန်းထဲမှာတစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအားမိမိဦးနှောက်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆားကစ် wiring ရဲ့" တစ်ဦးမှတ်သားစရာများကိုဗီဒီယိုမှတ်ချက်ချ, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် High-Speed ​​ကိုအင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ.
"ဂြိုလ်သားငါအစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့အခါခံစားခဲ့ရပုံကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုချင်ပါတယ်ဟူသောစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာကိုးကားတစ်ဦးလုလင်ကိုကဆိုသည်။ "ဒါဟာအတုနှင့်ငါ့ထံသို့နိုင်ငံခြားခံစားရတယ်။ "
"ကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲကြောင့်သာမန်လိင်အစားအမှန်တကယ်အမှန်တကယ်လိင်ဖြစ်စဉ်းစားကြောင်း (masturbating) မျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်လျက်မှဒါ conditional ဆည်းပူးင့်နဲ့တူဒါဟာ" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
"သူတို့နှစ်ဦးကိုရှုထောင်နှင့်ငါ့ဖန်ခွက်မော်နီတာနောက်ကွယ်မှထားကြပါတယ်မဟုတ်လျှင်အမျိုးသမီးများနေ့, အကြှနျုပျကိုလှည့်ကြဘူး," အခြားကဆိုသည်။
အခြားသူများကရငျးနှီးနေစဉ်အတွင်းတစ်စိုက်ထူရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သတင်းပို့ "porn မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ "
ဤဖြစ်ရပ်သည်အသစ်ဖြစ်သဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုစမတ်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်နှင့်လက်တော့ကွန်ပြူတာများမှတဆင့်လွယ်ကူစွာ၊ ပုဂ္ဂလိကလက်လှမ်းမီမှုနှင့်အတူမကြာသေးမီကတီထွင်မှုများဖြစ်သဖြင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စိတ်ပညာရှင်, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်ဆီးရောဂါပါရဂူအပါအဝင် - - ထိုအတောအတွင်းမှာတော့သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်တက် piling ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အသက်အရွယ်အတိတ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်၏အထွတ်အထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မညျ့သူလူပျိုတို့ထံမှမြည်တမ်းစကားသည်ဤအမြိုးမြိုးကြားနာဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့ပါ။
ဆီးရောဂါပါရဂူရှင်ပေါလုဘုရားကျောင်းလက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့မအပြီးသတ်သောသက်သေအထောက်အထားရှိစဉ်အခါ, ထိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ် "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပါအဝင်အဓိပ္ပာယ်နှင့်များစွာသော Clinician နှင့်ကုသစေသည် LifeSiteNews ပြောသည်ခိုင်မြဲစွာဒီလာမယ့်မျိုးဆက်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
"ဒါဟာလူတို့သညျ porn-သွေးဆောင် ED ခံစားနေရပြီးနေကြတယ်အတိအကျမည်မျှငယ်ရွယ်သိရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ သို့သော် "ဒီသစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်, ထိုသို့ရှားပါးမဟုတ်ဘူး မှတ်ချက်ချ ဒေါက်တာအာဗြဟံသည် Morgentaler, အမျိုးသားများရဲ့ကနျြးမာရေးဘော်စတွန်၏ဒါရိုက်တာနှင့် Harvard Medical School ကအချိန် urology ၏လက်တွေ့ပါမောက္ခ။
"ငါသည်ဤမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လူတွေကိုဒီလိုနဲ့ငါ့အတှေ့အကွုံစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကိုသိ," Maureen Newberg သည်ဝါရှင်တန်ဒီစီဧရိယာ၌ကျင့်သုံးမယ့်လိုင်စင်လက်တွေ့လူမှုရေးလုပ်သား (LCSW) ကပြောပါတယ်။
"ကျွန်မရဲ့ဖောက်သည် 95 ရာခိုင်နှုန်းကယောက်ျားလေးများနှင့်လူဖြစ်ကြ၏ရသောပုဂ္ဂလိကလက်တွေ့ပါပဲ။ အားလုံးနီးပါးကဤ clients များတစ်ဦးညစ်ညမ်းပြဿနာသို့မဟုတ် porn စွဲရှိသည်, "လိုင်စင်ရလက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုထုံးသည်ဒါဝိဒ် Pickup LifeSiteNews သို့ပြောသည်။
"သူတို့ပြဿနာကငါ့အတွေ့အကြုံနှင့်သူတို့၏အောင်မြင်မှု porn အသုံးပြုမှုထဲကရတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အစွမ်းထက်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ် '' မူးယစ်ဆေးဝါး, '' Pickup ကဆိုသည်။
porn စွဲအခြားစှဲကဲ့သို့လုလင်တစ်ဖွဲ့လုံးမျိုးဆက်၏ဘဝ impoverishing ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားစိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာ Gerard ဗန်တွင်း Aardweg, ကဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်:
ညစ်ညမ်းသောကျွန်သည်လူသားဆင်းရဲသူများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ကိုယ်တော်ဝံပုလွေ အပြာရုပ်ပုံများလေလေ၊ သူတို့၏ကြီးထွားလာသောလူကြီးဖြစ်လိုသောဆန္ဒဖြင့်သူတို့၏မွေးကင်းစကလေးများကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်လေလေ၊
လုလင်တို့သည်အားဖြင့်မကြာခဏ porn အသုံးပြုမှုကနေမရည်ရွယ်သော, မျှော်လင့်အကျိုးဆက်များဖြစ်ကောင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ကျန်းမာအိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေး၏ undermining ကျော်လွန်တိုးချဲ့။
မာကု Regnerus, Austin မှာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒပါမောက္ခနှင့်မိသားစုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏လေ့လာမှုများအတွက် Austin Institute ကမှာအကြီးတန်းသူချင်း, အကြံပြု နောက်ကျော 2012 အတွက်လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှု။
အဆိုပါသုတေသနပညာရှင် မှတ်ချက်ချ ထို "လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်များအတွက်လူငယ်လူကြီးယောက်ျားရဲ့ထောက်ခံမှုလုံးဝကျယ်ပြန်လွတ်လပ်ခွင့်, အခွင့်အရေး, လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်တရားမျှတမှုရန်မြင့်မြတ်သောကတိကဝတ်နှင့် ပတ်သက်. စံနမူနာ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင် by-product ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်လိင်အပြုအမူပုံမှန်ထိတွေ့နေတဲ့, "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှတဆင့်မျက်မြင်ဖြစ်နိုင်သည်။
"ဒီက web ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးညစ်ညမ်းဆိုဒ်များတဦးတည်းလိင်လုပ်ရပ်ခွဲခြားမှုအနည်းငယ်သာပြုပါ - သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော၏အမျိုးအစား - အခြားကနေ" Regnerus ကဆိုသည်။ "Gazers လိင်-လုပ်ရပ်မတူကွဲပြားမှု၏တကယျ့မီး-ရေပိုက် dousing မှကုသနေကြတယ်။ "
"ဒီကသင်၏အဘိုးရဲ့ Playboy မဟုတ်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
ကို "မိန့်ခွန်းလွတ်လပ်ခွင့်" ညစ်ညမ်း၏အခွင့်အရေးနှင့်၎င်းတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ထားပြီးကျော်စစ်တိုက်အဖြစ်အနည်းငယ်ငယ်ရွယ်အထီးကြည့်ရှုပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အခုတော့ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းလျစ်လျူရှုရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာနေသည်။
San Antonio ရှိတက္ကဆက်ပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ Neurosurgery ဌာနမှတွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ Donald Hilton နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်စတီကျုဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး က Pornography: Sex of the Fire of Sexing of the Sex of the Fire အဆိပ် (မရရှိနိုင်ပါ) ။
ဒါဟာနေရာတိုင်းပါပဲ။ Pornhub, ပိုက်ကွန်ရက်တွင်ဒုတိယအများဆုံးသွားရောက်ခဲ့ site ကို, 92 ဘီလီယံကိုလူတွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အ 2016 ဗီဒီယိုများအတွက်အလုံအလောက် 12.5 အတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအများအပြားဆယ်ကျော်သက်ထက်ပိုလူနှစ်ဦးအကြားအပါအဝင်မြင်ကြလိင်ဆက်ဆံခြင်း, ရှိခြင်းနှင့်အတူ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ယခုကပင်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏အဓိက mode ကိုဖြစ်လာသည်။
လူသားများအပေါ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဤလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်၎င်းကိုရှုမြင်သူများအားပျက်စီးစေပြီးဆက်လက်သုံးစွဲသူများကိုစွဲလမ်းစေသည်။ သို့သော်ဤအချက်များကိုညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်းအားထောက်ခံသည့်ပညာရှင်များကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုမှာဘာသာရေးမုန်းတီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသောအရှက်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။
တစ်ဦးအတွက်ဒေါက်တာဂျက်ဖရီ Satinover, ကြေညာချက် 2008 အတွက်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကော်မတီအပ်ကရှင်းပြခဲ့သည်: "ဒါဟာအမြဲညစ်ညမ်းတဲ့ပုံစံထက်ပိုပြီးဘာမျှကြောင်း Self-ထင်ရှားသလိုပဲဖြစ်ပါတယ် '' ဆိုသည့်စကားရပ်။ ' ၎င်း၏ putative တန်ရာ, ၎င်းမရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ဘေးအမြဲထို့ကြောင့် 'စကားရပ်' ရန်သင့်လျော်သောဝေါဟာရများအတွက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေများကိုသလောက်ရောင်ပြန်ဟပ်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစာပေ၏ 'ကငျြ့တရား' 'ကျော်ငြင်းခုန်; '' မြင့်သော 'သို့မဟုတ်' 'အနိမ့်' 'အနုပညာအဖြစ်က၎င်း၏သဘာဝ; ကမဆိုရှိပါတယ်ရှိမရှိ '' ရှေးတန်ဖိုး။ '' ညစ်ညမ်း '' စာပေ '' ၏ '' အလုပ်ဖြစ်တယ် '' ရန်နှင့်ညစ်ညမ်း '' ကခုန် '' ၏ '' လုပ်ရပ်များ '' အမေရိကန်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေသိပ္ပံ-The ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစကားရပ်အဖြစ်ညစ်ညမ်း၏နားလည်မှုဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်လုံးလုံးလြားလြားကြောင်းအောင် quotation သင်္ကေတအတွက်စကားများအမြင့်မားဆုံးအဆင့်ပြဌာန်းထားပါသည်။ ကိုးကား "
"ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာ၏ထွန်းနှင့်အတူ, ဒီစွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှု (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း) အတွက်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်နီးပါးခုခံ-အခမဲ့ဖြစ်လာနေပါတယ်" ဟု Satinover ဆက်ပြောသည်။
"ကျနော်တို့တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရဲ့ privacy ကိုအတွက်အသုံးဝင်သောပိုမိုအစွမ်းထက်အရင်ကထက်ဘိန်းဖြူ 100 အကြိမ်ပုံစံကြံစည်ခြင်းနှင့်မျက်စိကနေတဆင့်ဦးနှောက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Satinover ကဆက်ပြောသည်။ "ဒါဟာအနုပညာအဖြစ်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏နှင့်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ထားတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုံတူဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုမှတဆင့်န့်အသတ်ထောက်ပံ့ရေးအတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါတယ်။ "
"Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကဒီမှာဆက်နေရန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒေါက်တာတိ Lock ကိုတစ်ဦးလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံများအတွက်အင်စတီကျုမှာလက်ထောက်ပါမောက္ခ, မြင့်မြတ်သောကရုဏာတက္ကသိုလ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
PIED ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဖြစ်လိမ့်မည် "လူ Self-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မိဘများ၏သီလနှင့်အတူကြီးပြင်းလာရနိုင်သည်အထိမသင့်လျော်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုခြင်းမှသူတို့သားသမီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အင်တာနက် filter များ (နှင့်အင်တာနက်တာဝန်ခံ) ကိုသုံးရန်လိုအပ်ကြောင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်" Lock ကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည် LifeSiteNews ရန်။ "ဒါဟာ Self-ထိန်းချုပ်မှု, chastity, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း, ကြိုးနှံတန်ဖိုးထားသူတစ်ဦးကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်သလိုအင်အားစိုက်ထုတ်မဖြစ်ပါတယ်။ အမြိုးသားတို့ဆရာပထမဦးဆုံးကဤတန်ဖိုးများယုံကြည်တယ်ဖြစ်ရပါမည်။ "
"ဒါဟာခက်ခဲရောင်းမယ့်" Lock ကိုကဆိုသည်။ "သင်ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရား၏အသက်ကိုပေးတော်မူရန်နှင့်ဖောဖောသီသီအပ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ကိုသတိထားပါများမှာမထားရင်။ "
ပထမဦးစွာကျနော်တို့ porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ apologists အားဖြင့်ရာထူးတိုးအဆိပ်လိင်ကနေလာမယ့်မျိုးဆက်ကာကွယ်ပေးရမည်,
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်အရွယ်ရောက် porn ၏လူမဆန်ငြင်းပယ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှပြန်လာရမည်,
တတိယအချက်ကျနော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို ပို. ပို. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့် sexism ၏သည်းမခံသောဖြစ်ပါသည်, သေးကျနော်တို့လူတွေလိင်ဆက်ဆံနေကြနှင့်ကင်မရာများလှိမ့်နေလျှင်နှစ်ဦးစလုံးကျင်းပ။ ကျနော်တို့အတူတူစံဖို့ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကိုင်ရမည်,
စတုတ္ထကျနော်တို့ခေတ်သစ် porn ယဉ်ကျေးမှု၏ antithesis သောလေးစားမှု, စာနာမှုနှင့်သနားယဉ်ကျေးမှုမှပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။
porn ဖြတ်နှင့်၎င်း၏အလားအလာထိခိုက်သက်ရောက်မှုထွက်ပြေးလာသူအကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကသူ၏စည်းစိမ်အထောက်အကူဖြစ်စေလောကက်ဘ်ဆိုက်မှာတှေ့ရှိနိုငျသညျ, Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်.
porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှကျွန်ခံဖို့တစ်ဦးကခရစ်ယာန်-based အဖြေကကမ်းလှမ်းနေသည် ကြိုးစား.
11 မတ်လ 2019 ။ တို့ကအဓိကလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆောင်းပါးအတွက် မေီ Fleming ကမာရိရှပ်ခြင်းဖြင့်ကျယ်ပြန့်ကိုးကားခဲ့သည် အုပ်ထိန်းသူ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပေါ်မှာ။
လုလင်တစ်ဦး၏တတိယအထိယခု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရပါသည်။ အချို့ကဤကဲ့သို့သော penile implants အဖြစ်အစွန်းရောက်အစီအမံမှလှည့်ကြသည် - သို့သော်သူတို့၏ညစ်ညမ်းအလေ့အထတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုကန်သလဲ?
ပုံဥပမာ: Nishant Choksi
Tဒီမှာဆောင်ပုဒ်ကိုဆောင်သောလန်ဒန်မြေအောက်၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း adorning ကြော်ငြာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလာမယ့်မိမိအချုပ်ထဲမှာအကြိုးပွု-ရှာဖွေနေလူ၏တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ရန် "ED သေပြီ" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အောက်သေးငယ်အရေးအသားထဲမှာပြောပါတယ် "မစိုးရိမ်ပါနဲ့" ။ "Ed ကယောက်ျားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကောင်လေးအရာပါပဲ။ ဒါဟာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ရေတိုပါပဲ။ "ဒီပိုစတာမြှင့်တင်ကြသည် သစ်တစ်ခုအမှတ်တံဆိပ် sildenafil ၏ (အများဆုံး Viagra အဖြစ်လူသိများ), ကျနော်တို့ပြဿနာကိုသတ်သည်ထင်မှထင်ထားတဲ့။ ကရပ်အဖြစ်သို့သော်, ED ဝေးသေခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်။
Viagra ရဲ့ core စျေးကွက်ဆင်းရဲသောသူသည်ကျန်းမာရေးအတွက်အသက်ကြီးသူများဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့် 14% နှင့်လုလင်တို့အတှေ့အကွုံ ED ၏ 35% အကြားနောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှုတွေနှင့်စစ်တမ်းများ, အရသိရသည်။ "ဒါဟာအရူးပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ရဲ့" ဟုမာရိရှပ်ပြောပါတယ် ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာပရဟိတမတ်ေတာ, လိင်နှင့်အင်တာနက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ "2002 အချိန်အထိ ED နှင့်အတူ 40 အောက်မှာလူဖြစ်ပွားမှု 2-3% န်းကျင်ခဲ့သည်။ အခမဲ့-streaming များ, high-definition porn ဒီတော့အလွယ်တကူမရရှိနိုင်သောအခါ 2008 ကတည်းကကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ "ဒီအထောက်အထား, နာ။ တုံးလုံးနေရသော နှင့်သို့ရာတွင်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာအချက်ကြောင်း mounting ဖြစ်ပါတယ်။
Clare Faulkner အလယ်ပိုင်းလန်ဒန်အခြေစိုက် psychosexual နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကုထုံး, ED နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်သူတို့တွင်သည်။ "ငါသည်ယခု၎င်းတို့၏အစောပိုင်း 20s အတွက် client များ Ed ပါပြီ" ဟုသူမကဆိုသည်။ ညစ်ညမ်းနှင့်အတူပြဿနာရဲ့တစိတ်တပိုင်းက "ဟာအလွန် dissociated အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ stimulation သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲစေနိုငျသော, ပြင်ပမှလာသေး၏။ "လူရော့ခ်ခက်ဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသမီးတွေအားလုံးအချိန်ကိုလိင်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ" ဒါဟာလည်းအကြောင်း, သူမကပြောပါတယ်, ထိုဒဏ္ဍာရီမှုတွေကိုဖြစ်စေ "။
နောက်တဖန်, Faulkner ပြောပါတယ် "ဟုအဆိုပါအစစ်အမှန်လောကရှိပုံတူကူးယူခြင်းမရှိပါ" အရာ - ညစ်ညမ်း၏လုံကြည့်ရှုသူတို့၏လိင်ပိုင်းအတှေ့အကွုံထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းမှနေသားတကျဖြစ်လာသည်။ လိုအပ်ချက်နဲ့မလုံခြုံမှုနှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရှုပ်ထွေးလူ့ဖြစ်လျက်ရှိနှငျ့ရငျဆိုငျခံရ, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း Off-ချပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) အားဆက်ကပ်အပ်နှံအွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှာတော့သောင်းချီလုလင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ညစ်ညမ်း, hardcore မှပျော့ porn မှမိမိတို့တိုးတက်မှုနှင့်သူတို့အစစ်အမှန်ဘဝရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအတွက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတားအဆီးတွေကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ဖို့သူတို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုများမျှဝေပါ။ လူတို့သညျမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအလေ့အထကန်နိုင်လျှင်, သူတို့ကို real-ဘဝမှာနွေးထွေးမှုအားဖြင့်နှိုးဆွဖြစ်လာ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကို recover စတင်ကြောင်း: ဒါဟာလုံးလုံးလြားလြားသောအညစ်ညမ်း ED ဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒီသက်သေထွက်ဆိုချက်တွေအတွက်လက်တွေ့စာပေကနေတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားသက်သေပြဖို့ခဲယဉ်းသည်။
အချို့ကလူပျိုတို့ကဲ့သို့သောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အောက်ခြေထောက်ခံမှုလှုပ်ရှားမှုတွေ, စတင်ခဲ့ပါပြီ NoFap အလက်ဇန်းဒါး Rhodes အားဖြင့် US မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ( "အဘယ်သူမျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ" ကိုဘန်းစကား) ။ (ရှပ်လုလင်တို့သည်ယခု "ညစ်ညမ်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတူညီ - သူတို့သီးခြားစီသူတို့ကိုမမြင်မိပါဘူး" အဲဒီကဤသို့။ ) Rhodes ယခု 31, 11 သို့မဟုတ် 12 န်းကျင်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးစတင်ခဲ့သည်။ "ငါသည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်ကြီးပြင်းသူတွေကို၏ပထမမျိုးဆက်၌ရှိ၏" ဟုသူကမကြာသေးခင်ကအွန်လိုင်းဆွေးနွေးမှုကပြောသည်။
သူ 19 မှာလိင်ဆက်ဆံစတင်ခဲ့သည့်အချိန်အားဖြင့်သူကဆက်လက်: "ငါ porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ဘူး။ high-speed အင်တာနက်ညစ်ညမ်းငါ၏အလိင်ပညာရေးခဲ့ "မနှစ်ကသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်းအပေါ်အမေရိကန်အမျိုးသားရေးစင်တာမှာပရိသတ်ကိုပြောသည်။ " အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ကလေးများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာ၏အများကြီးညစ်ညမ်းတစ်ခုအွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံဘယ်မှာထိတွေ့မှုမှတဆင့် funneled လျက်ရှိသည် လက်တွေ့ကျကျမဖြစ်မနေဖြစ်၏။ "
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို Rhodes စတင်စလေ့လာသည့်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှာထူးဆန်းသည်မဟုတ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Middlesex တက္ကသိုလ်မှတွေ့ရှိရသည်မှာ ၆၀% သောကလေးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အိမ်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့ အိုင်းရစ်လေ့လာမှု ဂျာနယ်တွင် Porn လေ့လာရေးအတွက်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ဝေယောက်ျားလေးများ၏ 52% 13 ၏အသက်အရွယ်မှာသို့မဟုတ်အောက်မှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းသုံးပြီးစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာတစ်ခုတံခါးပေါက်ဖြစ်နိုငျသညျ, ရှပ်ကပြောပါတယ်။ သူတို့ကလေးတွေ Instagram ကိုပေါ်သူတို့ကိုကြည့်ဖို့ဆိုတော့နေနှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းအတွင်းသူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် "Porn ကြယ်ပွ Instagram ကိုအကောင့်အသစ်များ၏ရှိသည်: '' ။ , ငါ့နောက်ဆုံးထွက်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ '' တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကလစ်နှင့်သင်အမာခံညစ်ညမ်းမှာကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ 12 သို့မဟုတ် 13 ၏ကလေးများအမာခံအရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းကိုကြည့်ခံရဖို့ထင်မထားပေ။ "
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှ anti-ညစ်ညမ်းအဖှဲ့အစညျးမဟုတျပါဘူး, ရှပ်, ကပြောပါတယ် "ဒါပေမဲ့ပိုလျှံ porn ကလေးများကိုလိင်နှိုးဆွဖြစ်လာဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပါတယ်" ။ ထိုသို့သူတို့စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းခြင်းနှင့်စှဲဖို့အန္တရာယ်အရှိဆုံးပါပဲသည့်အခါတစ်ဦးနှစ်အရွယ်တွင် ", သူတို့ရဲ့ပုံနှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေသည်။ အများစုမှာစှဲနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စတင်ပါ။ "သူမနှင့် Faulkner ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်မြင့်တက်ကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းပြစေခြင်းငှါယုံကြည် အနှစ်တစ်ထောင်သူတို့ရှေ့မှာမျိုးဆက်ထက်လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံနေကြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဂျာနယ်မော်ကွန်းထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုအရသိရသည်။
ဂါယူဆပါသည်, အညစ်ညမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့တည်ထောင်သူ reboot Nationမိမိအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြော၏။ သူ 23 စဉ်အခါ, ဟုသူကပြောသည်"ငါဆင်းလှသောမိန်းကလေးတစ်ဦး, ငါသည်အလွန်မှဆွဲဆောင်ခဲ့သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal မခံစားရနိုင်ကြောင်းနှင့်တစ်ခုစိုက်ထူ၏နည်းနည်းလေး bit နဲ့မရနိုင်ဘူး။ "
အခြားအစှဲနှင့်ဝသကဲ့သို့, Faulkner says: "လူတွေကမြင့်မားသောရရှိရန်ပိုမိုအားကောင်းဆေးများလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုရရန်နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေးအကြောင်းကိုအမြဲပါပဲ။ ဘယ်သူတို့ကပိုအမာခံများနှင့်အလားအလာကြောက်မက်ဖွယ်ရရှိသွားတဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသည်။ ။ ငါ clients များသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပစ္စည်းနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် "သုတေသီများ compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအများ၏ဦးနှောက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါ, ရှပ် says:" သူတို့ကအားလုံးစှဲအတွက်ဘုံဖြစ်ကြောင်းအတူတူပင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုမြင်နေပါတယ်။ "
performance anxiety စိုးရိမ်စိတ်
တချို့ကနေဆဲအဖြစ်ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်ပညာရေးအတွက်မြင့်တက်ပယ်ချ စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ဒါပေမယ့်ရှပ်အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှရှိကြောင်းအချို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ် "ဘာကျနော်တို့ Clinician, လိင်ကုသ, ဆရာဝန်တွေနဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လူဦးထံမှကြားနာနေတဲ့ပြဿနာထက်ပို 80% porn-ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်၏။ " ပြောပါတယ် ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုယောဂီနှင့်အတူအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ running နှင့်ဆရာဝန်များနှင့်ဆေးဝါးပင်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. Ed ကြသူကသူတို့ငယ်ရွယ်အထီးလူနာတောင်းဆိုနေတာထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ "သူတို့ကသူတို့ကို Viagra ပေးခြင်းနေနှင့်သောသူတို့အားများစွာသောအလုပ်လုပ်မ" ရှပ်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာနောက်ခံပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမပေးပါ။ "
ယင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးအခါ, ရှပ်လုလင်တို့သည် penile implants (စိုက်ထူကူညီရန်လိင်တံထဲထညျ့ခြေတု) ရတဲ့ကြား၏ခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတဦးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသားများတစ်ခုမှာလူနာနှစ်ဦးကိုထိုကဲ့သို့သော implants ခဲ့ဟုဆိုသည်။ " ဘယ်သူမှမညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုမေးမြန်းဖို့စဉ်းစားခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်ကကျောင်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်, ရှပ်ပြန်ပြောပြသည်, တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်တွင် porn မှ masturbating တစ်နေ့များပြားလွန်းခဲ့ပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသူမမေးတယ်။ "သူတို့ကအားလုံးအချိန်ကိုအသုံးပြုနေသည်" ရှပ်ကပြောပါတယ်, "နှင့်ဘယ်သူမှပြဿနာတစ်ခုဖွင့်သူတို့ကိုပြောပြပါတယ်။ "
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်။ Mary Sharpe သည်စကော့တလန်တရားရုံးများ၌ဤအလွန်အမင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်းသမားများကိုကျွမ်းကျင်သောမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ အဆိုပါပုံပြင်ကိုလည်း The Sunday Post ကနေရရှိနိုင်ပါသည် ""